पितृसत्ताले पुरुष पनि खतरामा : कमला भासिन |
प्रकाशित मिति :2015-10-09 11:08:45
कमला भासिन दक्षिण एशियाकी चर्चित अधिकारकर्मी हुन्। उनका भनाइमा अब महिलाले पुरुषलाई परिवर्तन गराउनुपर्छ। महिला खबर डटकमका लागि दुर्गा कार्कीसँग कुरा गर्दै अधिकारकर्मी भासिनले भनिन्– पुरुषलाई यो कुरा बुझाउनु पर्छ की– पितृसत्ताले उनीहरूलाई पनि खतरा छ।
प्रत्येक ३ जना महिलामा १ जना हिंसापीडित हुन्छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। यो खाली पित्तृसत्त्तामक सोचका कारणले भएको हो की अन्य कारण पनि छन् ?
३ जना महिलामा एकजना हिंसामा पर्ने भनेको पित्तृसत्ताका कारणले मात्र होे। जाति, गरिवी, सिमान्तकृत भएर हुने हिंसा फरक हो। यो तथ्याङ्क संयुक्त राष्ट्र संघको हो। यो गरीव देशमा मात्रै होइन अमेरिका, रसियाको अवस्था पनि यही छ। यो संसारको तथ्याङ्क हो।
बलात्कार जहाँपनि छ। अहिले पनि अमेरीकामा कलेज र विश्वविद्यालयमा निकै हिंसा छ। भारतमा दाइजोका कारण हिंसा हुन्छ। अमेरिकामा यो छैन। केही कुरा उस्तै छन् केही फरक। तर, संसारभरी महिलामाथि हिंसा भइरहेकै छ।
विगत ४ वर्षदेखि हरेक वर्ष ‘उर्लदो सय करोड अभियान’ मनाइदै आइएको छ। यो अभियानपछि हिंसा कम भएको वा हिंसा सहनुहुन्न भन्ने चेतना विकास भएको छ ?
हामीले ४ वर्षदेखिमात्रै यो अभियान चलाइरहेका छौं। तर सय वर्षदेखि संसार भरी जारी महिला आन्दोलनले महिला हिंसाविरुद्ध आवाज उठाइरहेको छ। सती प्रथाविरुद्ध बोलरिहेका छौं। दाइजोविरुद्ध बोलिरहेको छौं। यसबाट महिलामाथि हुने हिंसा कम भएको छ म भन्दिनँ। तर, रिपोर्टीङ्ग धेरै भएको छ। महिलाले हिंसा आफनो अधिकारविरुद्धको ज्यादती हो भनेर बोल्न सुरु गरेका छन्।
महिला हिंसा अहिले पनि कम भएको छ भन्ने मलाइ लाग्दैन। किनकी अझैपनि पितृसत्ता निकै बलियो छ। पहिला समाजिक र धार्मिक पितृसत्ता मात्रै थियो। महिलाको कन्यादान दिने, तीज र गर्वाचोथ मनाउने, छोराका लागि ब्रत बस्ने, अन्तिम संस्कार गर्न नदिने यी धार्मिक पितृसत्ता थिए।
त्यसमा अहिले पूँजीबादी पितृसत्ता थपिएको छ। पोर्नोग्राफीमा, कस्मेटिकमा अरवौं डलर लगानी गर्ने र महिलालाई फेयर एण्ड लब्ली लगाएर गोरी हौ भन्ने सन्देश फैलाइएको छ। हामी किन गोरी हुने? के महिलाको व्यवहारमा गोरोपन छैन? हाम्रो गोरोपन लिपिस्टक र अग्लो हिलमा मात्रै छ ? हामीमा भएको क्षमताका कारण हाम्रो इज्जत हुनुपर्छ न कि बाहिरी आवरणको कारणले।
पूँजीबादी पितृसत्ताले बच्चैदेखि केटा केटीले खेल्ने खेलौनामा समेत बिभाजन गरेर अर्बौ लगानी गरेको छ। भारतमा बनाइने फिल्ममा कुन प्रकारले महिलालाई प्रयोग गरिएको छ। आइटम नम्बरमा कसरी महिलालाई देखाएका छन् ? हामीले देखेका छौ। यो सवै पुँजीवादी पितृसत्ताले महिलालाई अझै पछाडी धकेलरिहको छ भन्ने उदाहरण हो।
हामी पहिला सोच्थ्यौं, जव शिक्षा आउँछ तव यो खत्तम होला। तर, जो मान्छे पूँजीवादी पितृसत्ताका लागि काम गरिरहेका छन् ती सवै शिक्षित हुन्। आज पैसाका लागि यो पूँजीवादी व्यवस्था जे पनि गर्न तयार छ। त्यसैले समयले पढाइ र चेतना फरक रहेछ भन्ने बुझाइ दिएको छ। पढाइले मात्रै नहुने रहेछ। चेतना सवैभन्दा ठुलो रहेछ। अहिले मानिसहरू नाफा र लाभको पछाडिमात्रै दौडिरहेका छन्। नाफा कै लागि चुरोट बेच्छन् र लाभ कै लागि पोर्नोग्राफी बेच्छन्। लाभ कै लागि महिलासँग दाइजो लिन्छन्।
महिला हिंसा अन्त्य गर्न र अधिकार प्राप्तिका लागि अहिले भइरहेका अभियान र आन्दोलनको तरिका परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन तपाइँलाई ?
चेतना आउँदै नआएको होइन। नेपाल मै हेर्नुस। नेपालको नयाँ संविधानले ३३ प्रतिशत महिलालाई सहभागी गराउने व्यवस्था ल्याएको छ। नेपालमा वैवाहिक बलात्कारविरुद्धको कानुन छ। त्यसैले दृष्टिकोणमा त परिवर्तन भएको छ। तर, जति हुनुपर्ने हो त्यो छैन।
मेरो बिचारमा विगत ७० वर्षदेखि महिलामा निकै परिवर्तन आएको छ। तर, पुरुषमा त्यो परिवर्तन आएको छैन। त्यसैले अब हामीले पुरुषलाई परिवर्तन गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई बुझाउनु छ की पितृसत्ताले पुरुषलाई पनि खतरा छ। अव पुरुषलाई परिवर्तन गर्ने वेला आएको छ। जवसम्म महिला स्वतन्त्र हुँदैनन् तवसम्म पुरुष पनि स्वतन्त्र हुँदैनन्।
तपाई नेपाल आइरहनु हुन्छ । तपाइले नेपाली महिला र अन्य देशका महिलाको चेतनास्तर कस्तो पाउनुभएको छ ?
पुरै नेपाल र भारतका बारेमा भन्न निकै गाह्रो छ। भारतमा धेरै मानिस महिलाबादी छन्। तर, भारतमै हेर्नुस् महिलाको संख्या निकै कम हुँदै गइरहेको छ। भारतमा अहिलेपनि महिलामाथि फरक फरक किसिमका अत्याचार हुन्छन्। त्यसैले यसको तुलना गर्न निकै अप्ठयारो छ।
तर, नेपालको महिलावादी आन्दोलन निकै बलियो छ। तपाइहरूले संस्ादमा ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार दिलाउनुभयो। यो भारतमा अहिलेसम्म छैन। संसारका निकै थोरै देशमा यस्तो भएको छ। तपाइहरूले वैवाहिक बलात्कारविरुद्ध बोल्नुभयो र कानुन आयो।
यो अहिलेसम्म भारतमा छैन। त्यसैले धेरै कुरामा नेपाल अघि छ। नेपालको महिला अधिकार र मानव अधिकारको आन्दोलन निकै अगाडी छ। हामी सबैले यसको इज्जत गरेका छौं, सलाम गरेको छौं।
संसार कै ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा जम्मा १२ प्रतिशत महिला संसदमा छन्। श्रीलंकामा जम्मा ५ प्रतिशत छन्। नेपालमा ३३ प्रतिशत संसदमा र ४० प्रतिशत स्थानीय निकायमा सहभागिता छ। नेपाल अन्य देशका लागि उदाहरण बन्न सक्छ ?
एकदम। म भारतलगायत जहाँ जान्छु मैले नेपालको बारेमा कुरा गर्छु। नेपालले प्राप्त गरेको त्यो निकै ठुलो उपलब्धि हो र यसलाई अझै अघि लैजानुपर्छ।
भारतीय फिल्म र टेलिसिरियलमा महिलालाई एउटा अवला नारीका रुपमा देखाइएको हुन्छ। त्यसले पनि समाजमा महिलाको भुमिकाको एउटा छाप बसाल्न सहयोग गरेको छ। यसविरुद्ध तपाइहरूले आवाज उठाउनु भएको छैन ?
एकदमै हो। हामीहरूले वर्षौदेखि यसविरुद्ध आवाज उठाइरहेको छौं। पैसालागि उनीहरू यस्तो गरिरहेका छन्। भारतीय चलचित्रमा, सिरियलमा महिलाको भुमिकालाई जसरी चित्रित गरिएको छ, यसले हामीलाई निकै चिन्तित बनाइरहेको छ। जोसँग पैसा हुन्छ उ जे गर्न पनि तयार हुन्छ।
यो सँगै केहीे महिलाबादी चलचित्र पनि भारतमा बनेका छन्। हामी हाम्रा तालिममा पनि ती चलचित्र देखाउँछाैं। तर, अफशोस यहाँ यस्ता चलचित्र कोही पनि हेर्दैनन्, हेर्न चाहँदैनन्। ती पनि हामीले मात्रै हेर्छौ।
दवङ्ग नामको एउटा भारतीय चलचित्र छ। त्यसमा धेरै महिलाविरोधी गीतहरू छन्। त्यस्ता चलचित्रले ३ दिनमा सय करोड कमाउँछन्। त्यो पैसा कसले दियो त भन्दा हामीले नै दियाैं। भारतीय र विश्वभरीका नागरिकले त्यो चलचित्र सफल बनाइदियाैं। त्यसैले आम जनताले पनि यस्तो चलचित्रलाई अस्वीकार गर्नुपर्‍यो।
तर, यीनीहरू यति बलिया छन् कि हामीलाई सजिलै उल्लु बनाइरहेका छन्। यसकारणले पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन।
यदि महिला पनि पुरुष सँगसँगै काम गरे भने पुरुषको बोझ पनि कम हुन्छ। उसले आफ्नी बहिनीका लागि दाइजो दिने पैसा जम्मा गर्नुुपर्दैन। हामीले बराबरीको कुरा गरेको हो। यो कुरा हामीले हाम्रा नेताहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ।
प्रकाशित मितिः २०७२ असाेज २२ गते शुक्रवार